खाद्य ऐन, २०२३ | गृहपृष्ठ
Home अर्थान्तर खाद्य ऐन, २०२३
on: २६ माघ २०७४, शुक्रबार ११:०२ अर्थान्तर
खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग
सञ्जीवकुमार कर्णको जन्म विसं २०२८ मा महोत्तरी जिल्लामा भएको हो । उनले २०५० सालमा केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस धरानबाट खाद्यप्रविधिमा स्नातक र २०६३ सालमा थाइल्याण्डको माहिडोल युनिभर्सिटीबाट खाद्य विज्ञान तथा पोषण विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०५२ सालदेखि खाद्य पोषण तथा गुण नियन्त्रण क्षेत्रीय खाद्य प्रयोगशाला पोखरामा खाद्य अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा सेवा प्रारम्भ गरेका उनी विसं २०७२ सालदेखि खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् ।
ऐन समयसान्दर्भिक बन्न जरुरी छ
सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य तथा सुविधा कायम राख्न, खाद्यपदार्थमा कुनै अवाञ्छनीय मिसावट रोक्न, खाद्यपदार्थमा रहेको स्वाभाविक कुनै गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने गर्न र खाद्यपदार्थको उचितस्तर बनाइराख्ने उद्देश्यका साथ खाद्य ऐन, २०२३ तथा खाद्य नियमावली २०२७ र यस अन्तगर्तका विभिन्न निर्देशिका तथा कार्यविधि ल्याइएको छ । यस्ता कानूनको कार्यान्वयन कृषि विकास मन्त्रालय मातहतको खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग एवम् अन्य कार्यालयहरूले गर्छन् ।
नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने खालका खाद्यपदार्थ उत्पादन तथा विक्रीवितरणमा रोक लगाउने उद्देश्यले यस्ता कानून बनाइएका हुन् । ऐनमा दूषित, न्यूतस्तर तथा ढाँटी झुक्याई कुनै पनि खाद्यपदार्थ उत्पादन, विक्रीवितरण तथा आयातनिर्यात गर्न निषेध गरिएको छ । त्यस्ता खाद्यपदार्थ रोक्का राख्न सक्ने अधिकार पनि खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई दिइएको छ । यसका साथै खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न खाद्य अनुज्ञापत्र लिने अधिकार पनि प्रदान गरेको छ । खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जिल्ला सरकारी वकिलको सल्लाहमा तोकेको विभिन्न कसुरका लागि दण्डसजाय गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । खाद्यपदार्थको गुणस्तर तोक्ने, मापदण्डअनुरूप भए नभएको प्रयोगशाला जाँच गर्ने, खाद्य उद्योग तथा बजार अनुगमन र निरीक्षण गर्ने, खाद्य निरीक्षकको व्यवस्था गर्ने जस्ता अधिकार ऐनले विभागलाई दिएको छ ।
राज्यको संरचना, खाद्य स्वच्छताका नवीनतम आयामहरू, अन्तरराष्ट्रिय परिवेश, खाद्य व्यापारमा आएका परिवर्तनलाई समेत आत्मसात् गरी विद्यमान खाद्य ऐनमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न नितान्त आवश्यक छ । वर्तमान सन्दर्भमा खाद्यवस्तुको स्वच्छता तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले नयाँ किसिमले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन ल्याउन आवश्यक छ । कृषि विकास मन्त्रालयले खाद्य स्वच्छता ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने काम अगाडि बढाएको छ । प्रस्तावित खाद्य स्वच्छता ऐनको मस्यौदामा सङ्घीय संरचनाअनुरूप राज्यको तल्लो निकाय (स्थानीय तह)बाट समेत खाद्य गुण नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न अवश्यक छ । खाद्य शृङ्खलाका सम्पूर्ण चरणहरूमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरीयता कायम गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक छ । हाल खाद्यवस्तुको प्रयोगशाला परीक्षण गरी गुणस्तर नियमन गर्ने गरिएकोमा, असल उत्पादन अभ्यास जीएमपी, असल कृषि अभ्यास जीएमपी, हानि विश्लेषण तथा महत्त्वपूर्ण विन्दु नियन्त्रणजस्ता खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणालीहरू अवलम्बन गरी व्यवस्थित बनाउन लागिएको छ । त्यस्तै जोखीम विश्लेषणका आधारमा खाद्य गुणस्तर तथा स्वच्छता कायम गर्ने, खाद्य नमूना सङ्कलन विधि तथा परीक्षण अझ वैज्ञानिक तथा परिष्कृत गरिकाले गर्न पनि मन्त्रालय लागेको छ । खाद्य व्यवसाय, उत्पादन, आयातनिर्यात गर्दा अनिवार्य अनुमति लिने तथा सम्पूर्ण खाद्य व्यवसाय खाद्य नियामक निकायमा दर्ता हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । दण्ड जरीवानालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने, नानो टेक्नोलोजी, माइक्रो इन्क्याप्सुलेशन आदि आधुनिक प्रविधिबाट उत्पादित खाद्य पदार्थको व्यवस्थित किमिसले नियमन गर्न खाद्य पदार्थको दायरालाई अझ फराकिलो पार्दै विभिन्न प्रकारका पेयपदार्थ, प्रोप्राइटरी खाद्यपदार्थ, आहारपूरक खाद्यपदार्थ, नयाँ प्रकारका खाद्यपदार्थको नियमनसमेत थप गरिएको छ । खाद्यपदार्थ उत्पादकलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै उत्पादित खाद्यपदार्थको गुणस्तरको जिम्मा स्वयम् उत्पादकले नै लिई बजारमा विक्रीवितरण हुनुपूर्व नै खाद्यपदार्थको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ । गुणस्तर कायम गर्न उत्पादक, थोक विक्रेता, वितरक, आयातकर्ता, उपभोक्ताको जिम्मेवारीको व्यवस्था गर्ने तथा खाद्यपदार्थको उपभोगबाट उपभोक्तालाई केही क्षति पुग्न गए सोको क्षतिपूर्ति उत्पादक वा वितरकबाट भराउने प्रावधान राख्न लागिएको छ । खाद्य स्वच्छताका सन्दर्भमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रावधान तथा खाद्यपदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था कोडेक्स एलिमेण्टेरियस कमिशनले निर्धारण गरेको मापदण्ड तथा कार्यविधि समेतलाई ध्यान दिँदै स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खाद्यपदार्थ मात्र आयातनिर्यात हुने किसिमले प्रभावकारी रूपमा नियमन हुने व्यवस्था हुनेछ ।
विगतमा खाद्य ऐन, २०२३ को कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरीलाई आधार मानी खाद्यवस्तुको उचितस्तर कायम राख्नुपर्छ । खाद्य व्यापारमा समेत सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न प्रावधानसहित खाद्य स्वच्छता ऐन, २०७४ को मस्यौदा तयार गर्न कृषि विकास मन्त्रालय तथा खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आवश्यक तयारी गरिरहेका छन् ।
मुद्दाको सङ्ख्या बढेको छ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं
खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कस्तो अधिकार प्राप्त छ ?
खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्यपदार्थमा गुणस्तर नभएको पाएमा सरकारी वकिलको रायबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गर्छ । मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुरू मुद्दा हेर्ने गर्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कति र कस्ता मुद्दा आउने गरेका छन् ?
गत आर्थिक वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा मुद्दाको सङ्ख्या बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्ममा ३४ ओटा मुद्दा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । अहिलेसम्म दर्ता भएका मुद्दाको प्रकृति हेर्दा खानेपानी र डेरी उद्योगको धेरै परेका छन् । अन्य उद्योगमा मिठाइ पसल, तेल उद्योग, चिया उद्योग र अहिले रक्सीमा पनि मिसावट भएको भन्ने विषय आएको छ ।
खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सम्बन्धित कम्पनीमा गई नमूना लिने र गलत देखिएमा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गर्छ । तर, यो वर्ष अन्य वर्षको तुलनामा बढी नै दर्ता भएका छन् । उपभोक्ता र काम गर्ने निकाय सक्रिय भएर आउँदा पनि मुद्दा घट्नुको साटो बढ्दै जानु राम्रो सङ्केत होइन ।
गुणस्तर कम भएका सामग्रीमा कस्ता पदार्थ हुँदा रहेछन् ?
गुणस्तरको विषय प्राविधिक हो । यो विषय हामीलाई त्यति थाहा हुँदैन । हामीकहाँ आउने विषय पानी र दूधको बढी हुन्छ । पानीमा प्रदूषणको मात्रा बढी हुनु, दूधमा चिल्लोको मात्रा कम हुने मुद्दा छन् । खाद्यपदार्थमा दाल, चामल, चिनीलगायतमा मिसावट तथा मिठाइमा खान नहुने वस्तु राखेर बनाउने गरिएको पाइन्छ । त्यसरी गलत प्रकृतिको पदार्थ राखेको पाइए वा मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने पदार्थ राखेको प्रमाणित भए खाद्य ऐन, २०२३ बमोजिम मुद्दा दायर हुन्छ र त्यही ऐनको परिधिभित्र रहेर यस कार्यालयबाट मुद्दाको छिनोफानो गरिन्छ ।
ऐन धेरै पुरानो देखिएकाले सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ?
खाद्य ऐन, २०२३ आएको बेला म जन्मेकै थिइनँ । त्यतिबेलाको बजारको अवस्था र अहिलेको बजारको अवस्थामा आकाश जमीनको फरक छ । खाद्य ऐनमा पहिलोपटक १ हजारदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्ने भनिएको छ । हामीले कल्पना गर्न सक्छौं, २०२३ सालको रू. १ हजार र अहिले कति हुन्छ होला ? ऐन भनेको समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।
हामी पुरानो राजनीतिक र अन्य अवस्थाबाट फरक अवस्थामा प्रवेश गरेका छौं । स्थानीय सरकार बनेका छन् । स्थानीय तहको सरकारलाई अधिकारलाई दिनुपर्छ । त्यसैले अहिलेको खाद्य ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन अधिकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विभाजन हुने गरी बन्नुुपर्छ ।
अहिले उपभोक्ता हितलाई समेट्ने गरी धेरै ऐन कानून भएकाले सबैलाई समेट्ने छाता ऐन बनाउनुपर्छ, जसले मुद्दाको किनारा लगाउनदेखि उद्योग व्यवसायीलगायत सबैलाई सजिलो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
उपभोक्तावादी संस्थाको गतिविधि नियमन गर्नुपर्छ
केन्द्रीय सदस्य, उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्च
खाद्य ऐन, २०२३ को कुनकुन पक्षको कमजोरीका कारण उपभोक्ता स्वास्थ्यमा असर परेको छ र त्यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ ?
वास्तवमा २०२३ सालमा बनेको खाद्य ऐन समयानुकूल परिमार्जन नहुँदा खाद्य बजार स्वच्छ र उपभोक्तामैत्री हुन नसकेको सत्य हो । तर, यसको अर्थ ऐन कामै नलाग्ने भयो भन्ने होइन । ऐनले निर्दिष्ट गरेका अति सामान्य विषयहरू पनि किन कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् भन्ने पाटो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । अहिलेको ऐनमा अपराध गर्नेलाई दिइने दण्डसजाय एकदमै कम छ, उपभोक्ताले खाद्यपदार्थमा समस्या पर्नेबित्तिकै उजुरी गर्ने र तत्काल सुनुवाइ हुने स्पष्ट व्यवस्था छैन । खाद्यनिरीक्षकको अधिकार क्षेत्र, मुद्दा चलाउने निकाय, नमूना सङ्कलनको प्रक्रियाजस्ता विषय अन्तरराष्ट्रिय मान्यताबमोजिम परिमार्जित छैनन् । त्यसैले स्वास्थ्यमा असर पर्ने वस्तु उत्पादन तथा विक्रीवितरण हुने गरेका छन् ।
अहिले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उपभोक्ताको खाद्यसुरक्षा विषयमा के काम गरिरहेको छ ?
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालमा उपभोक्ताको हकहितको संरक्षणका लागि वस्तु तथा सेवा बजारलाई स्वच्छ, कालोबजारीरहित र उपभोक्तामैत्री बनाउने अभियानमा विगत २३ वर्षदेखि लागिरहेको संस्था हो । खाद्यअधिकार उपभोक्ता अधिकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । हामी आम उपभोक्ताले गुणस्तरीय, स्वच्छ र पोषणयुक्त खानेकुरा आवश्यक परेको समयमा खान पाउनुपर्छ र उपभोक्ताको यो संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चित हुनुपर्छ भनी सरोकारवालासँग निरन्तर पैरवी, उपभोक्ता जागरण तथा सचेतना जगाइरहेको छौं ।
उपभोक्तावादी सङ्घसस्थाहरू नै व्यापारीसँग मिलेर कमसल सामान बजारमा पठाउन सहयोग गर्छन् भन्ने सुनिन्छ, के यो सत्य हो ?
हो, वास्तवमा पछिल्लो समय उपभोक्ता आन्दोलन पनि विकृत बन्दै गएको तीतो यथार्थ हामीसामु छ । उपभोक्ताका नाममा खुलेका केही संस्था तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीका रूपमा आपूmलाई चिनाउने केही व्यक्ति बजारमा बार्गेनिङ गर्ने, पैसा असुल्ने, बजारका अपराधीसँग मिलेर अनैतिक क्रियाकलापमा लागेको सुनिन थालेका छन् र यस्ता कार्यले आम जनमानसमा उपभोक्ता आन्दोलनप्रति वितृष्णा उत्पन्न गराएको छ । हाम्रो संस्था नेपालमा उपभोक्ता आन्दोलनको गरिमा बचाइराख्ने र आमउपभोक्ताको हितका लागि निरन्तर निःस्वार्थ रूपमा लाग्नेमा दृढ छ । हाम्रो संस्थासँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिले बजारमा उपभोक्तको नाममा गैरकानूनी काम गरे वा बार्गेनिङ गरेमा तत्काल कारबाही गर्ने संयन्त्र हामीसँग छ र अहिलेसम्म यस्ता क्रियाकलापमा कोही पनि संलग्न छैनन् । तर, पछिल्लो समय च्याउसरी खुलेका उपभोक्तावादी संस्थाहरूको गतिविधिको भने नियमन गर्नैपर्ने भएको छ ।
अहिले रहेको खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सम्पूर्ण खाद्य सामानको गुणस्तर नियन्त्रण गर्न सम्भव छ ?
खाद्यवस्तुको नियमन गर्नु भनेको नितान्त प्राविधिक विषय हो । यसका लागि खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको विकल्प खोज्नु हुँदैन, बरु यसलाई सुदृढ र सबल बनाउनु आवश्यक छ । गैरप्राविधिक व्यक्ति वा निकायले गरेको बजार नियमनले बजारमा झन् अराजकता ल्याउन सक्छ । अब बजार स्वच्छ र उपभोक्तामैत्री बनाउने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकारले गर्ने खाद्य अनुगमनमा पनि विषयगत विज्ञ अनिवार्य राख्नुपर्छ ।
खाद्य गुणस्तरका सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय जगत्को अभ्यास के कस्तो छ ?
खाद्यवस्तुको अनुगमनका लागि स्थापित अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरू छन् । हरेक खाद्यवस्तुको गुणस्तर तथा स्तरीयताका रूपमा रहेको कोडेक्सले तोकेबमोजिम विभिन्न मुलुकले आफू सुहाउँदो हुने गरी कानून लागू गर्न सक्छन् । नेपालमा पनि खाद्यवस्तुको गुणस्तर निर्धारण यसरी नै गर्ने गरिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा समयसमयमा ऐनकानूनहरू समयानुकूल परिमार्जन भइरहन्छन् । तर, नेपाल र अन्य मुलुकको खाद्य सुशासनमा मुख्य अन्तर भनेको यहाँ समयसापेक्ष ऐनकानून तथा गुणस्तर र मापदण्डहरू परिमार्जन हुँदैन ।
उपभोक्तावादी संस्थाहरूले उपभोक्ताको हित गर्न केके गर्न सक्छन् ?
बजारको सुशासनका लागि उपभोक्तावादीले माग पक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । सरकारलाई बजार स्वच्छ तथा उपभोक्तामैत्री बनाउन दबाब दिने, ऐनकानूनको सापेक्षित परिमार्जनका लागि पैरवी गर्ने, बजारका सरोकारवालालाई सचेत गराउने र आम उपभोक्तामा जागरण ल्याउने उपभोक्तावादी सङ्घसंस्थाको काम हो । बजार अनुगमन उपभोक्तावादी सङ्घसंस्थाले गर्ने होइन, राज्यकै संयन्त्रबाट हुनुपर्छ । उपभोक्तावादीले बजार अनुगमन सही भएको छ वा छैन भनी अनुगमन मात्र गर्नुपर्छ ।
कमसल खाद्यसामग्री उपभोक्तासम्म पुग्नबाट रोक्न कसकसको भूमिका रहन्छ ? उपभोक्ताले कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ र ती केके हुन् ?
बजार स्वच्छ बनाउन एउटा मात्र क्षेत्रको बलले पुग्दैन । यसमा सरकार, व्यापारी, उपभोक्तावादी संस्था र उपभोक्ता सबैको दायित्व उत्तिकै रहन्छ । सरकारले विद्यमान ऐनकानून कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन गर्ने, कैफियत भेटिएमा कारबाही गर्ने, मर्काविरुद्धको उजुरीलाई तत्काल सुनुवाइ गर्ने गर्नुपर्छ । व्यापारीले स्वच्छ र ठगीरहित बजार स्थापनाका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ भने उपभोक्तावादी संस्थाले निरन्तर खबरदारी, पैरवी तथा उपभोक्तामा निरन्तर जागरण ल्याउने काम गर्नुपर्छ । आम उपभोक्ताले पनि आफूले उपभोग गर्दै आएको वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, मूल्य, नाप, दर्ता, उपभोगपश्चात्को असर आदिका बारेमा सचेत हुनुपर्छ ।
स्थानीय तहलाई पनि अधिकार दिई छाता ऐन बनाउन आवश्यक छ
खाद्य किराना थोक व्यवसायी सङ्घ
नेपालमा अनुगमन शुरू भएदेखि नै सरकारले खाद्यान्नमा विशेष अनुगमन गर्दै आएको छ । खाद्यान्नका व्यापारीमा आएको सचेतना र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र विभिन्न व्यापारिक संस्थाको पहलमा अनुगमन भइरहेको छ । त्यसैले अहिले खाद्यान्नमा मिसावट हुने त्यति सम्भावना छैन ।
भर्खरै मात्र गाडीमा उपभोक्ता ठगिएको विषय आएको थियो । गाडीमा धेरै मानिस ठगिएका थिए । त्यस्ता क्षेत्रमा पनि कारबाहीको विषय आएको छ भने स्वास्थ्यलाई असर गर्ने खाद्यसामग्रीमा कारबाही र अनुगमन नगर्ने भन्ने त कुरैै रहँदैन ।
खाद्यसामग्रीमा मिसावट हुने गरेको विषय उपभोक्तामा चेतना जगाउन जरुरी छ । घरका गृहिणीलाई पनि साधारण तरीकाले मिसावट छ वा छैन भन्ने जान्न सक्ने किसिमको तालीम दिनुपर्छ । यस्ता तालीमलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने धेरै मात्रामा खाद्यान्नमा मिसावट हटेर जान्छ । अहिले ऐनकानून संशोधन गर्ने विषय पनि आएको छ । नियतवश कसैले मिसावट गरेको रहेछ भने त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ । कसैले अन्जानमा गलत गरेको छ भने अनुसन्धान गरी उसलाई सचेत गराउनु पर्छ ।
अहिले उपभोक्ताको हितका लागि भनेर विभिन्न ऐनकानून छन्, जसले उपभोक्ता, व्यापारी र कारबाही गर्ने निकाय नै अन्योलमा पर्नेे अवस्था छ । त्यसैले देश सङ्घीयतामा गएको बेला स्थानीय तहलाई पनि अधिकार दिने गरेर छाता ऐन बनाउनु आवश्यक छ ।